एउटी केटीका अनेक नाम, कामः फेसबुकमा केटा फसाउने, धम्की दिने र लाखौं पैसा असुल्ने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एउटी केटीका अनेक नाम, कामः फेसबुकमा केटा फसाउने, धम्की दिने र लाखौं पैसा असुल्ने
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा मित्रता गरेर मानिसहरुलाई फसाउने र ठगी गर्ने धन्दा धेरै चलिरहेको छ । यस्तै एउटा निकै अनौठो घटनाको पर्दाफाश भएको छ । बलात्कारको अभियोगमा फसाउने धम्की दिँदै युवकसँग ३० लाख रुपैयाँ मागेकी पायलको रहस्य खुल्दै गएको छ । सोधपुछमा खुलेको छ कि यी युवतीले फरक फरक नामबाट फेसबुक आइडी बनाउँछिन् र युवकहरुलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएर मित्रता गर्छिन् । मेलमिलाप बढेपछि ती युवकलाई ब्ल्याकमेल गरेर लाखौं रुपैयाँ असुल्छिन् । तर, अहिले यस्तै गर्दा उनी प्रहरीको फन्दामा परिन् ।